प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो कडा ट्वीट — Sanchar Kendra
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो कडा ट्वीट
काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले फेरी कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा अल्पज्ञान, अहंकार र भयंकरको ककटेल देखिएको बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ सुनेपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा कमी कमजोरी स्वीकार्ने र सच्चिने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको भट्टराईले बताए । ‘लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर अकंटक कुशासन चलाउने र देशलाई बर्बादीमा लैजाने बुझियो’ उनले टिप्पणी गरे । यस्तै सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले गत जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनमा संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आजको बैठकले पारित गरेको हो ।
सांसदहरु दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे पनि आज बहुमतले पारित भएको छ । बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकाले यसमा भएका व्यवस्था संशोधन हुने छैनन् । यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गर्नै आइरहेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आइतवार र सोमवार दुई दिनसम्म छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा ४ गते ३९ र ५ गते ६७ गरी जम्मा १०६ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए।
सांसदले उठाएका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आज जवाफ दिएपछि पारित गरिएको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधिभसभाको अर्काे बैठक यही जेठ १३ गते मङ्गलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।
यस्तै भारतले नेपालको भुमि प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरि उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको ब्यापक बिरोध भएपछि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपरेको प्राङ्ग कोट्याउदै ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्यको सधैं जित हुने भन्दै भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकका सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् । उनले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न परिस्थिति जटिल हुने लक्षण देखिए पनि जसरी पनि नेपाली भूमि फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
उनले भारतको मिचाहा प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै भारतीय प्रतीक चिन्हको प्रसंग पनि उप्काएका छन् । आफुले भारतसँग ‘सत्यको जित हुन्छ कि सिंहको जित हुन्छ’ भन्ने कुराको जवाफ पनि माग्ने बताएका छन् ।
‘अशोकाले स्थापना गरेको चारतिर फर्केको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सत्यमेव जयते भारतको प्रतीक चिन्हमा लेखेको छ चिन्ह भारतको हो तर म विश्वास गर्छु । हामी सबै नेपालीले सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्छौ । म भारतलाई सोध्नेवाला छु कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेर विवादित बनाएको बताए । ‘भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपछि कालापानीमा जान ब्लक भयौं । त्यसबेलाका शासकहरूले बोल्न डराए । वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अवगत गराउन चाहन्छु कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ओझेल पर्न दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमि भारतले अकुपाइ गरेर, अर्घेल्याइँ गरेर विवादित बनाइएको हो ।’
यस्तै प्रधानमन्त्रिले आजै संसदमा सांसदहरुले सोधेका थप प्रश्नहरुको पनि जवाफ दिएका छन् । सांसदहरुले कोरोना कहरकाबीच सरकारले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता नगरेको, कोरोना पिडितहरुको उचित व्यवस्थापन र राहातको वितरण गर्ने कुरामा आलटाल गरेको जस्ता महत्वका प्रश्नहरु सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि ति प्रश्नहरुका जवाफ दिइरहेका छन् ।